Usoro njem ọhụrụ nke Seychelles n'ihi COVID-19 Omicron Variant
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Usoro njem ọhụrụ nke Seychelles n'ihi COVID-19 Omicron Variant
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Nkwupụta njem Seychelles ọhụrụ
Ministri ahụike ekwenyela na ọ na-etinye usoro njem ọhụrụ maka ndị ọbịa, ụmụ amaala Seychellois na ndị bi na mpaghara South Africa n'ihi ụdị COVID-19 ọhụrụ na-ekesa na South Africa na mba ndị gbara ya gburugburu.
Na nzaghachi, ụlọ ọrụ ụgbọ elu mba, Air Seychelles, akagbuola ụgbọ elu niile si Johannesburg gaa Seychelles ma e wezụga nke Disemba 1, Disemba 17, na Disemba 19. Ndị njem nọ na Seychelles bụ ndị akwadoro ịga Johannesburg kwesịrị ịkpọtụrụ ndị ọrụ ụgbọ elu ha gbasara ụgbọ elu ha gbasara. ụgbọ elu ha na-apụ.
Usoro ọhụrụ a chọrọ ndị niile nọ na Seychelles bụ ndị gara mba ndị a n'ime izu abụọ gara aga ka ha gaa maka ule PCR ma ọ bụrụ na ha nọ na Seychelles site na ise (5) ruo ụbọchị iri na anọ (14) ka ha bịarutere. Ndị nọ na Seychelles ihe na-erughị ụbọchị ise (5) kwesịrị ichere maka ụbọchị 5 ịga maka ule PCR.
Ndị Seychellois niile na ndị bi na-alaghachi Seychelles bụ ndị garala mba ndị a n'ime izu abụọ gara aga ka achọrọ iche onwe ha ma mee ule PCR nke manyere na Day 5 mgbe ha bịarutere.
Ime njem na South Africa na mba ndị ọzọ akpọrọ aha na-ada mba nke ukwuu.
Ọ bụ ezie na enweghị ihe akaebe na-egosi na variant B.1.1.529, aha ya bụ Omicron nke World Health Organisation, ka achọpụtara na Seychelles, ndị ọchịchị obodo dụrụ ọdụ na ihe niile ahụike ọha na nke ọha na eze nọ n'ọnọdụ ga-enwerịrị nkwanye ùgwù.
Iji mara na Seychelles na-anabata ndị ọbịa niile n'agbanyeghị ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ha na ọnọdụ na ha nwere asambodo nnwale PCR na-adịghị mma nke COVID-19 nke a ga-ewere n'ime awa 72 tupu njem, belụsọ maka ndị ọbịa si mba na-abịa na ndepụta amachibidoro dị ka ndị a: South Africa, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia na Zimbabwe.
Achọghị iche iche maka ndị ọbịa na-abata Seychelles. Agbanyeghị, a na-agba ha ume ka a gbaa ha ọgwụ mgbochi tupu ha aga njem. A na-ahapụ ha ịgagharị n'efu n'oge ezumike ha niile mana ha ga-agbasorịrị usoro ahụike ọha niile. Ha nweere onwe ha ịnọ n'ụlọ ebe obibi ndị njem nlegharị anya kwadoro ahụike ma ọ bụrụ na ha na-agbaso ụkpụrụ ahụike niile dị na ụlọ ọrụ ndị a.
Ihe ntinye chọrọ na usoro ahụike yana ndepụta niile emelitere nke ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya nwere ikike na ụlọ ebe obibi enwetara asambodo dịka COVID-safe dị na Ministry of Foreign Affairs and Tourism's mkpokọta na Seychelles.govtas.com.